Ukubathanda okanye ukubazonda, iThe Dream Theatre ibuyele ekugqithiseni kwabo ukuthanda ukuhlawula, i-albhamu yesigxina esine-double-CD engummangaliso . Le ngxelo yomntu otyunjweyo ekufumaneni umculo kwaye uyisebenzise ukunqoba ubukhosi bamashishini. Isimo esilungileyo, kodwa ibali lihambelanayo kwi-albhamu.
Ukungena kwiiyure ezimbini kunye neyimizuzu engama-34 ngaphezu kweengoma ezingama-34, le nto i-albhamu ye-epic, kwaye ingabi yintliziyo ephelile.
Ekhutshwe nge-stellar musicianship, eqhelekileyo (eqinisweni, ngamaxesha amaninzi athile). Kodwa ngaba iphakame phantsi kobunzima bayo obukhulu?
Uhlala Unqwenela, Ngamanye amaxesha Uvakalelwa
Njengoko umntu angalindela, le albhamu izandile ngokumangalisayo. Okwesibini kuphela kuSteven Wilson ngokubhekiselele kumgangatho we-audio rock, umxube kunye nemveliso kakhulu. Izilwanyana kunye neyandi zivakala kakuhle, izandi ezifana nomatshini oshishino-mveliso (ukubonakalisa isimo samatye oomatshini) i-buzz enamandla, kwaye ibhande ngokwalo liphelele kwifom. Ngomculo, kuphela i-nitpick ukungabikho ngokupheleleyo kwe-bassist uJohn Myung nantoni na ngaphandle kwendima exhasa inkxaso.
Umsebenzi kaJames LaBrie uhlukeneyo, ngamanye amaxesha, amaxesha amaninzi athile. Ilizwi lakhe liya phezulu "Mzalwana, Ngaba Ungayiva" kunye nokucutshulwa kwangoko kwi-albhamu, kodwa kwiingoma ze-schmaltzy ezifana ne "Ukugubungela Ngumoya" uvakale ngathi uyahlula kwiinqwelo zakhe, ukukhwela kwintlanganiso amancinci amancinci.
Oku kuphazamisa ngokucacileyo ukusuka kwe-albhamu.
Amagaritars kaJohn Petrucci anqotshwa kwaye azinqande kwi-albhamu enkulu. "Ubomi Obulungileyo" lusinika i-solo enomdla, kwaye unexesha elithile elihle le-acoustic. Ukuzikhukhumeza kukuncinci.
Musa ukwenza iphutha, nangona kunjalo: Ukumangalisa yiJordan uRessess's impumelelo.
Iibhodi zebhodi, ii-pianos, kunye neenkambo zilawula ipalali yomculo. Ukugqithisa umyalelo kwinqanaba apha, kungcono okanye kukubi.
Ngaloo nto ingqondweni, inxalenye yensimbi yentsimbi eqhubela phambili ithatha isihlalo esikude kwimicimbi apha. Abo bafuna okulandelayo "Ndibambe Ngaphantsi" okanye "Iintshaba Zaphakathi" abayi kuwufumana apha. Eyona nto ihamba phambili, iindawo ezihamba phambili ziquka "Ubomi Bokushiya" kunye nesimo sokuma "Isiqalo Esitsha," ingoma enkulu kunazo zonke kwi-albhamu, ivalwe ngaphantsi kwemizuzu engama-8.
Ngokwahlukileyo, kunye nokunye okuqhelekileyo kwe -Astonishing , ukuba ingoma yakho oyintandokazi ukusuka kwi- Dream'satre yase-2013 "yayilungele iRide," uya kufumana into enokuyithanda apha. Imizabalazo emangalisa ukuhamba umgca ocacileyo phakathi kwenkcazo ehamba phambili eklasini kunye ne-Elton John-style yesimboli sokutshintshela isandi se-soundtrack sap. "UMthetho weFaythe" kunye "Ukhethiweyo" ngababubulayo, kwaye "Qala kwakhona" kuya kuba sekhaya kwi-albhamu yeKrismesi. Naliphi na umzuzwana ozuziweyo kwiindlela eziqhubekayo, ezinamandla ezityhulwa yiminikelo emfutshane.
Ummangaliso ucela ukuzibophezela okukhulu, kunye nokuzonwabisa okuphulaphule ekugqibeleni kuza kwezinto ezifunwayo: ukuthanda, ukuhlambalaza, ukuhlaziya ngokukhawuleza? Thatha oku. Ukutsalana okupheleleyo, isinyithi esincinci?
Hayi ngeli xesha. I-Dream Theatre ngokuqinisekileyo ikhuphe i-albhamu ye-epic, kodwa akuyiyo wonke umntu.
I-Dream Theater - I- Tracklist eyamangalisa
01. Inzala YeeNOMACS
02. Ukugqitywa kweDystopian
03. Isipho Somculo
05. Ubomi obulungileyo
06. Nkosi Nafaryus
07. Umsindisi kwi-Square
08. Xa ixesha lakho lifikile
09. UMthetho weFaythe
10. Iintsuku ezintathu
11. I-Hovering Stayjourn
12. Mzalwana, Ngaba Undiva?
13. Ubomi Bubekho
16. Ukunikezelwa kokulinga
17. I-Discord Disc
18. Uhlobo lwe-X
19. Isiqalo esitsha
20. Indlela eya kwiNguqulelo
02. Umzuzu Wokuhlazeka
03. I-Cove yaseZulwini
04. Qala kwakhona
05. Indlela eyahlukanayo
06. Ingxoxo yomatshini
07. I-Shadow Walk
08. Ukugqibela kwam
09. Ukulahleka kweFaythe
I-Whispers In Wind
11. Ingoma yeeNkulungwane zeZandi
12. Ihlabathi lethu elitsha
13. Amandla aphantsi
(yakhululwa ngoJanuwari 29, 2016 kwiRekodi ze-Roadrunner)
Umthandazo kuSanta Thomas More
I-Top 10 Eninzi Iingoma zeDisco eziLwazi